Munamato Kuti Chengetedza Hwakakundikana Ukama | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Kunamatira Kuti Uchengetedze Hwakakundikana Ukama
Kune zvakawanda zvakundikana michato nhasi. Zvinhu zvakawanda zvinoshungurudza zvinogara muwanano uye zvinoparadza mubatanidzwa unofadza. Mamwe mazuva akati wandei apfuura, nhau dzakaburitswa kuma dailies ese emunyika uye dzakatepfenyurwa padzimwe nhepfenyuro nezve mukadzi weHausa achingo zivikanwa saSanda Maryam uyo anonzi akauraya murume wake nekuda kwekusatendeka.
Zvine musoro, vanhu vazhinji vakasarudza kuti kana mubatanidzwa usiri kushanda, chinhu chakanakisa vanogona kuita vaviri vacho kuenda munzira dzakasiyana. Ipo, izvo hazvisi kuda kwaMwari mubatanidzwa. Saka, iwe unoitei kana hukama husiri kushanda zvakanaka? Paunoyedza zvese, iwe unokwanisa uye ivo vasiri kushanda, iwe unongogara wobva watarisa kuti zvinhu zvawedzera kushata? kana kuti unongofamba wakanyarara usingakwikwidze uye rega mumwe munhu atore murume kana mukadzi aende. Chero nzira, kana iwe ukandibvunza, ini ndinokuudza iyo ndiyo nguva yakanakisa yekuenda kuna Mwari muminamato. Hapana imwe nguva yekusimudza aritari yehukama ihwohwo kupfuura ikozvino. Kana iwe uchinge wasiya zvinhu munzvimbo yavo inokoromoka izvozvi, ipapo unenge uine chokwadi chekuti uchawa muwanano munguva pfupi. Nei usingagadziri vese munzvimbo yeminamato.
Nhasi tichave tichitarisa mimwe minamato yega yehukama hwekutadza, minamato iyi a kuteterera kwemunhu pakati pako naMwari. Iwe unenge uri kusimudza hukama hwako kuna Mwari muMinamato, unenge uchiita moyo wako nekutenda kuruponeso rwehukama hwako. Munamato unobva pamwoyo unogara uchifarirwa naMwari. Ini ndakanyora pazasi mimwe minamato ine simba yehukama hwekukundikana, vabatise mukutenda uye ugashire zvako zvishamiso.
Minamato Yekuteterera Yemunhu Pahukama Hunokundikana:
Vanodiwa Baba vari kudenga, hukama hwangu parizvino hwakananga kudombo uye kana pasina chakaitwa nezvazvo, zvinogona kuparira njodzi isingatsanangurike nekukurumidza. Handidi kuti imba yangu iputsike, handidi kuti imba yangu ikundikane, ndinokumbira kuti netsitsi dzenyu mugadzirise zvakaputsika muhukama hwangu nezita raJesu.
Baba Tenzi, sekunzwisisa kwandinoita kuti pahukama hwese pane vanhu vanobatanidzwa. Uye Bhaibheri rinotiita tinzwisise kuti vaviri havagone kufamba kunze kwekunge vabvumirana. Ipo, tingawirirane sei isu tisingatombonzwisisana? Ishe, ndinokumbira kuti mutipewo nyasha dzekugara tichinzwisisana. Ini ndinopesana nemasimba ese ekusahwisisa pakati pedu, tipeiwo nyasha dzekugara tichizvinzwisisa. Ishe ndibatsireiwo semurume / mukadzi kugara ndichingwarira zvido zvemukadzi wangu, ndipeiwo nyasha dzekumunzwisisa nguva dzose kana achitaura uye kana asingatombo taure izwi. Ndinoda kuva murume / mukadzi ane rudo kumukadzi wangu / murume uye baba vanoziva kuvana vangu. Ndinotsiura Satani mumba mangu, ndinouya kuzorwa neumwe neumwe wehuipi hwaakamisikidza kuti aparadze runyararo mumba mangu, ndinokoka Muchinda weRugare mumba mangu, ndinokumbira kuti Muchinda werunyararo aite imba yangu nzvimbo yake yekugara. muzita raJesu Kristu.
Ishe Mwari, ndinotsvaga nyasha dzekugara ndichiremekedza mukadzi wangu / Murume, ini handidi kuva murume / mukadzi anogara achichinja simba rake retsandanyama kurwisa mukadzi / murume wake, ndipeiwo mukana wekugara ndichiwirirana naye / iye. Ndinokumbira kuti umupe iye nyasha dzekugara achindiremekedza zvakare, kuti andipe ruremekedzo rwandinofanirwa muzita raJesu Kristu.
Ishe Mwari, izwi renyu rinoti kutya Jehovha ndiko kutanga kwehungwaru. Ndinokumbira kuti iwe ugadzire kutya kwako mumoyo yedu. Tipeiwo nyasha dzekukutyai, kuti kana isu tese tichikutyai; hatizoiti chero chinhu chakaipa kupesana. Gadzira mumoyo medu uye rudo rusina kusvibiswa, rudo runotarisa kupfuura kushoropodzwa, rudo runotarisa kupfuura vanofunga, ndinokumbira kuti uripe mumoyo medu. Tenzi ndapota, tidzidzisei kuzvida kwedu kuti pasave neruvengo pakati pedu muzita raJesu Kristu.
Ishe Mwari, isu tinocheka hukama hweshoko renyu, isu tinochinyudza chakavakirwa muChido chenyu kuti pasisina masimba, huremende kana kuunganidza vanozokwanisa kuisa mutsauko pakati pedu. Rudo rwako ngarutonge mumwoyo medu, rudo rwako ngarugare mumba medu. Ini ndinosimbisa chisungo cherudo chiripo pakati pedu neropa rako rinokosha. Izwi rako rinotaura izvo zvakabatanidzwa naIshe, ngapasave nemunhu anoparadzanisa, ini ndinotaura ndichipokana nechinhu chero chipi zvacho chinoda kugadzika pakati pedu, ini ndinachiparadza nesimba rako, ndinouya kuzorwa neropa rako munaJesu Kristu zita.
Ishe vanonamata nezve dutu rine hasha muhukama hwangu parizvino, ndinokumbira kuti utaure rugare mariri muzita raJesu. Ini ndinokumbira maoko ako ekuporesa kuti ave pane ese akakuvadzwa chikamu muhukama hwangu. Ishe Mwari, musarega dutu rechinguvana iri riise kuparadzaniswa zvachose pakati pedu, tipeiwo nyasha dzekuita takura uye zvakanyanya kukosha pamweya kuti tirege kukutadzira muzita raJesu Kristu.
Ishe, ndinonamata kuti dutu razvino muhukama hwangu rirege kundikonzera kutadza. Ndiwe wega unogona kugadzirisa moyo wakaputsika. Ndinokumbira kuti utore vhiri rehukama hwangu, ndinokumbira kuti iwe uve mutyairi wengarava yangu yemuchato. Nekuti ndinoziva kuti paunofamba nechikepe uye paunobata vhiri, chikepe chinovimbiswa nezvekuchengeteka, Ishe ndinopa ngarava yehukama hwangu kwauri, ndinokumbira kuti iwe uifambise kuenda kunzvimbo ine chinangwa. Ishe ndiri kutsauka kubva pamuri kuti mutore zvizere, ruzivo rwangu rwese uye hunhu ndakaisa parutivi, ndinokumbira kuti iwe utidzidzise iwe pachako, nzira yekudyidzana nesu, nzira kwayo yekupindura, Ishe ndinokumbira kuti iwe uchatidzidzisa muzita raJesu Kristu.
Ishe panopera dutu iri, tipeiwo Nyasha dzekuti tichakamira takasimba mauri. Musarega isu tichibhurwa nekupiswa kwazvino kwechinguvana, tipeiwo nyasha dzekusimba mauri, zvakadaro, hatisi kuona chero mhinduro parizvino, asi tipeiwo inyasha dzekugara tichivimba mamuri. Isu tinoziva iyi inguva yekuyedza, ndinokumbira kuti kana chikamu ichi chapera, tipeiwo Nyasha kuti tisarase kutenda kwedu nazvo. Muzita raJesu Kristu
Previous nyayaMinamato Yemurume Anodhakwa
inoteveraWemunamato wega Wenyasha Mune Imba yakaoma Yeroora
Faustina Boateng June 28, 2020 Pa 10: 53 am
Ndatenda Mwari neminamato iyi ine simba n Ndinoziva kuti zvishoma nezvishoma Mwari achaisa muchato wangu padombo rakasimba raJesu Kristu weNazareta, ndinokutendai Jesu, Mwari akuropafadzei zvikuru.
BENEATA TABITA Kukadzi 5, 2021 At 7:51 am
Elsie Chikunguru 12, 2021 At 11:43 am
Ek bid die 8 gebede oor my huwelik ek weet God sal kragtig Ingryp in my huwelik en ons weer as man en vrou kamer en bed sal deel. Ons ndeye Amper 30 Jaar getroud
20 Minamato yenamato yekununurwa kubva pakutukwa kukuru
Minyengetero Yakasimba Yekudzivirira Pabasa